Mudara raTinashe Muchuri: June 2012
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its next bi- monthly meeting to be held in Harare at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday July 7, 2012 from 12:30pm to 4:30pm
This time Shimmer Chinodya is talking about how he has been able to do fictional work alongside text book writing while Chiedza Musengezi will be dealing with how she has been able to double up as prolific editor and writer. This will also be an opportunity to interact and discuss other issues in our literature today and strategise before the forthcoming book fair. A substantive agenda will be sent to you very soon.
Mumwe nomumwe sabhuku sango rake remichero nemipuranga.
Masabhuku vatungamiri vemitunhu iri pasi pedunhu rasadunhu. Masabhuku ane vanhu vari pasi pawo. Masabhuku ndiwo anopa minda kuvanhu vari pasi pawo. Ndiwo anoganhura mitunhu yawo achiisa kuti kumwe ndiko kune hufuro, kumwe ndiko kunogarwa, kumwe kuri iko kunorimwa. Masabhuku ndiwo anopa vanhu pokuita man'adhi emubatanidzwa kana ayo emunhu wegawega.
Masabhuku, aya anohurongwa hwemitunhu yawo yekuti miti isangotemwatemwa. Vanokurudzira kuti vanhu vasatema miti. Nyaya yacho ndeyekuti vanoisa mitemo yekuti awanikwa achitema muti anosungwa nomutemo uyo unozomupa kuti aripe kwasabhuku. Kazhinji abatwa nemhosva anonzi abike mupeta unomwiwa noruzhinji pamwe nembudzi yeusavi inogochwa musi unobuda doro.
Dambudziko riripo nderekuti masabhuku anosimbirira iyi yokukurudzira vagari vemumitunhu yawo kuti vasatema miti, asi havavakurudziri kuti vasime miti. Mumatunhu mazhinji kunowanikwa kuti miti mishoma. Pamisha mizhinji hapana kana muti wemuchero. Pamisha mizhinji hapana kana muti wemapuranga. Matenga mazhinji ndeemiti yemisango. Matanga mazhinji ndeemiti yemusango. Zvitinha zvekumatunhu aya zvinopiswa nehuni dzemiti yemusango. Miti yacho yavawo mishoma nokuti haikuri nokukurumidza.
Masabhuku anofanira kuva nehurongwa hwekuti misha mizhinji isimwe miti. Kana musha unenge wawanikwa usina muti unofanira kuripiswa sekuripiswa kunoitwa avo vanotema miti. Kana zvadai, vanhu vese vekumatunhu vachasima miti. Miti iyi inozopa maguta kumatunhu ose ayo mamwe acho anonzi anowana mvura shoma. Kana zvadai zvinobva zvareva kuti miti yava hupenyu kumhuri yose.
Pamusoro peizvi panofanirawo kuva nechirongwa chinonzi ndechasabhuku chokusima miti. Sabhuku nemutunhu wake anofanira kusima miti iyo inozoita kuti mumusha make musazongotemwa miti zvisina maturo. Miti iyi inozoshandiswa kuti masango adzinire miti. Izvi zvinozoita kuti nyika ive yakashongedzeka. Rudadiso rwayo rugounza mufaro kuvagari vayo. Vana nyanduri nanagwenyambira vagowana zvokurumbidza.
Nyaya yemhirizhonga mudzimba yavikira chose munyika yeZimbabwe. Nguva zhinji mhirizhonga dzemudzimba dzinoguma dzaba upenyu hwavanhu. Mhirizhonga idzi dzinonyanya kudya vanamai navana. Vana vasina chavakatadza vanomedzwa nemhirizhonga yavasina kuvamba. Mhirizhonga iyoyi zvakare inobatanidzira zvipfuyo nemidziyo yepamba. Zvose zvinodzimba nayo. Hapana chinosiiwa pamarwadzo emhirizhonga yemudzimba. Zvikonero zvemhirizhonga yemudzimba zvakawanda zvikuru, asi handisi kuda kumhanya naizvozvo nokuti ini ndinoda kuti nditaure nokuti mhirizhonga iyi yaigadziriswa sei munguva yekumashugre uko vanhu tisati tatanga kugara rumwe rumwe kure nevemadzinza edu.
Kare zvaiti kana mhirizhonga ichinge yaiitika mumusha. Musha waigara dare nanyakuita mhirizhonga uyu. Kazhinji vaiva varume avo vairova madzimai avo. Zvino zvaiti kana zvadai, musha waigara dare rekutonga murume arova mudzimai. Pose pairobwa mudzimai nomurume wake, murume airipiswa. Aiti kana akarova mudzimai zvokumubvisa zino,aibvisiswa mombe. Dzimwe mhirizhonga dzakafanana nokunyimana bonde dzairipiswawo mbudzi zvichidaro. Madzimai pane misha iya ina varume vane ruoko rwegudo vaipedzisira vava ndivo varidzi vedanga, murume dzake dzapera nokuripa.Mudzimai aive asingafaniri kurobwa. Mudzimai ndimambokadzi, uyo anouya mumusha kuzokudza dzinza rekwaaroorwa. Mudzimai akakosha zvikuru mumusha maaroorwa, ndiko saka varume vaiva vasina pfuma vaishingirira kutema ugariri kwemakore manomwe pasina kana mombe imwe yavaizoenda nayo kumusha kwavo, asi kuri kutsvaka munhu akakosha muupenyu hwavo uyu. Vamwe vaitondopfudzira mombe pamisha yavangu apo vaipiwa mombe pagore kusvika dzakwana dzokundopa danga kuvakarabwa. Izvi zvaireva kukosha kwemudzimai.
Saka nokudaro mudzimai aiva munhu akakosha. Kana kuri kuridzi rwekwedu, mudzimai aichengetedzwa zvokuti aisafanira kupinda mumunda kundotsva nezuva nokuti aizopera runako. Zvino kana runako rwapera murume ozoita mafungafunga zvinozopa kundotsvaka mumwe mudzimai. Zvakadaro hazvo hakuna mudzimai wechipiri aiuya mumusha mudzimai wekutanga asina kunge aziviswa uye atenderana nazvo. kunyange murume aida kuroora umwe mudzimai, haaibvumidzwa kungoerekana auya nomudzimai wacho mudzimai mukuru asingazivi. Izvi kana zvaiitika, murume airipiswa mombe, kutsiva kukanganisira kwaanenge aita mudzimai wake. zvazvaita ndezvekuti murume kana oda mudzimai wepiri aitotuma hanzvadzi dzake kuti dzitaure nomudzimai wake kuti abvume kuti atore mumwe mudzimai. Zvakare mudzimai ndiye aiudza murume mudzimai wekutora. Izvi zvinoreva kuti mudzimai aiva nesimba rokusarudzira murume wake mudzimai wechipiri wakamunakira. Zvakare mudzimai wechipiri wainzi anotumwa semwana nomudzimai mukuru. Iye ndiye akatanga kusvika pamusha sakani ainzi aterere kubva kuna vahosi. hurungwa uhu hwaikonzera kuti kusava nemhirizhonga yakanyanya seyavako mazuva ano inosakiswa namabarika aya.
Zvaitiwo kana madzimai akarwa kana kupumhana huroyi, dare remusha raiti dzakadai dzoda vabereki vemadzimai varipo avo avizotaurira vanasikana vavo kuti varipane. Kana zvanzi mudzimai aripe mhosva yaakapara, aisatora pfuma yemurume wake, asi kutoti aishandisa pfuma yake yaakaita nokuruka seme, kuumba hari, mbuya nyamukuta, kubva mutengesa mbeu dzemutseu yake kana kutoinda kundotora kwaakabarwa kana iye pachake asina pfuma. Izvi zvaiitirwa kuti kana akabhadharirwa muripo nemurume wake haaizoona kurwadza kwazvo, nokudaro aizoenderera mberi achiita mabasa asina maturo mhirizhonga igoramba ichingoitika mumusha umu. Zvino kana vabereki vakavawo munyaya iyi vaizobatsirana nokwakaroorwa kudzora hasha idzo dzinopinza munhu mumhirizhonga.
Mhirizhonga kana yakurisa zvokuti mumhuri yakundikanwa kugadziriswa, yaiendeswa kwasabhuku. Sabhuku kana vakundikana vaiikanda kwasadunhu. Zvino sadunhu vaitadza vaiiendesa kwamambo. Mambo ndivo vaiva vekupedzesera kutonga nyaya dzakadai. Asi kana mwana atadzwa kutongwa mumusha kare vaiva netsika yekuramba munhu. kana mubereki akasvika pakuramba mwana wake zvinoreva kuti kana pamba pako anenge asingatsiki, chero kumba kwako anenga asingatsiki. Izvi zvinhu zvaisadiwa navanhu vakawanda zvokuti vaiedza napose pavanogona kuti vasarambwa navabereki vavo. Zvakare kana munhu aizoramba achingoita mhirizhonga aizodzingwa mumusha masabhuku izvo zviita kuti andogara kunzvimbo dzavatorwa. Kwenyu maigadzirisa mhirizhonga sei? Zvakafanana here? Kana zvakasiyana, takasiyana papi? Chiiwo chaunofunga kuti chinofanira kuitwa parizvino kuti mhirizhonga yemudzimba idzikire?
Madhuna asati auya, mai vaidaidzwa nezita rani? Mai vachipinda mumusha mavaizova muroora, vaitanga nekudaidzwa nezita remutupo wavo. Kana vachiera moyo vainzi MaMoyo. Kana vachiera mhofu vainzi VaChehera. Kana vachiera shumba, vainzi MaShumba kana kuti MaSibanda. Kana vachiera mbizi vainzi MaDhuve. Aya ose mazita okwavakabva. Kune dzimwe nzvimbo vaipiwa zita romunin'ina wemurume wavo kana zita rehanzvadzi yemurume wavo. Kana zita remuramu wavo riri Zvidzai, vaibva vadaidzwa kuti Mai Zvidzai, kana tete vachinzi Rumbidzai vaibva vanzi, Mai Rumbidzai. Apa ndipowo zvapo pavaizopiwa mazita ekwavakaroorwa. Zvakare vaizotora zita romwana wavo nemurume wavo mushure mokunge vaita mwana wekutanga. Kune dzimwe nzvimbo vaigona kuzoramba vachidaidzwa namazita iwayo nokuti mwana wacho aigona kuzopiwa zita rababamunini kana ratete.
Zvino vaiti kana vakura, vaidaidzwa zvakare nemazita ekwavakabva. Kana kwavo kwainzi kwaShummba ivo vaibva vanzi Shumba. Vaitodaidzwa sezvinonzi mwanakomana wekumusha kwavo. Izvi zvaireva hazvo kuti taiva tisina dambudziko rekudaidza madzimai edu kuti chii, inova ndiyo nhamo yatava nayo nhasi uno mushure mekuuya kwavadhuna ndokutiudza kuti mudzimai anofanira kutora zita remurume wake achisiya rekwaakazvarwa. Izvi zvinova ndizvo zvava kutipa nhamo yokuti madzimai anhasi ati tava kuda kuti tisadonhedza mazita ekwatakabva. Zvakadaro izvo zvava kutorwa nhasi sekuti mudzimai atora zita rekumurume wake ambunyikidzwa nekuti abviswa mazikanirwe akwe ekubva pakuzvarwa. Asizve dambudziko ravapo nderekuti kana zvotaurwa zvinonzi zvakabva patsika dzedu. Tsika dzotukwa sekuti ndizvo zvataiva kare. Kana ndotarira ndoona kuti imwe nguva vamwe vanhu vanotukwa nenyaya dzisi dzavo.
sei vanhu vachipa vamwe vanhu tsika dzisi dzavo vachiti ndedzavo. Inyaya yekusada kutsvaka chokwadi here inokonzera kuti tizvituke nezvinhu zvatisina kutanga? Ko tinodii kutaura patakatangira kuresva mafambiro? Iyi ndiyo nyaya inondinetsa nekuti kwandakazvarwa vekwedu havambodaidzwa nemazita ekwavakaroorwa kunze kwekuti vachidaidzwa nemazita evana vavo. Kunyange varungu vakauya vakasandura mazita avanambuya vangu kuti rokuberekwa kwavo rigova rababa vasekuru vangu, asi vaidaidzwa nemazita ekumusha kwavo. Mbuya vakuru vainzi VaMukangare nokuti kumusha kwavo kwaiva kwaMukangare. Mbuya vadiki vainzi VaMabika nokuti vaiva vedzinza rekwaMabikasheche kuBikita. Izvi zvinondiita kuti ndisanetseka kana ndikahwa zvangu mudzimai achiti handidi kudaidzwa nezita rekwandakaroorwa asi kwandakabarwa. Hazvindinetsi uye hazvindishungurudzi nokuti kwedu haisi nyaya. Tsika yekwedu haipesanisi murora nezita rekwaakabva. Madhuna ndiwo zvawo akauya atiputsira hurungwa hwedu hwemazita hwakanaka. Zvino kana wazviziva, hazvifaniri kunetsa munhu kana madzimai nhasi achiti anoda kushandisa zita rekwaakazvarwa pamwechete nerekwaakaroorwa aya anonzi double barrel pachirumbi. Mai vangu vanoshandisa zita ravo pasina anopikisana nazvo. Iwe unofunga sei? Ichokwadi here? Kana dziri nhema ndpapi paunopikisana napo?Ngatikurukure tiwane chokwadi. Itsika yedu here kana kuti itsika yamadhuna?